Xiaomi Mi Max ma lahaan doono taleefano badan | Androidsis
Xagaagan waxaa la xaqiijiyay in Xiaomi Ma dooneyn inaan tuuro wax taleefan ah gudaha miisaanka Mi Max, bayaan ka soo baxay shirkadda. Go'aan horey cabsi uga abuuray mustaqbalka labadan taleefoon ee soo saaraha. Cabsidii ugu xumeyd ayaa la xaqiijiyay, markan agaasimaha guud ee shirkada.
Waxaa la xaqiijiyay in qiyaasta Xiaomi Mi Max ma lahaan doonto taleefanno dheeri ah. Shirkaddu waxay xiritaanka kama dambaysta ah u xirtay taleefannadan kala duwan, oo ah wax la isla dhexmarayay tan iyo xagaagan, laakiin hadda waxay noqotay run. Go'aan ay shirkaddu durba si rasmi ah u samaysay.
Lu Weibing, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda, ayaa ah qofka ka xaqiijiyey Weibo in aysan jiri doonin taleefanno intaas ka badan oo dhexdooda ah. Waa Xiaomi Mi Max 3, oo la bilaabay 2018, oo weli ah taleefankii ugu dambeeyay ee qoyskan ka tirsan shirkadda. Taleefano kala duwan oo caan ku ahaa shaashadaha waaweyn.
Noocyadan taleefannada ah ayaa soo muuqday gaar ahaan shaashadaheeda waaweyn, gaar ahaan ka weyn inta kale moodeellada. Dhibaatadu waxay tahay ka hor, dhammaan taleefannada kale waxay lahaayeen shaashado 5,5-inji ah. Sababtoo ah hadda waxa caadiga ahi waa inay ka badan yihiin 6 inji, waxay umuuqataa in kala duwanaanshahani aanu macno samaynayn.
Dhinaca kale, Caannimada Redmi oo ah astaan ma caawineyso xaddiga Xiaomi Mi Max sidoo kale. Marka shirkaddu waxay u goysaa lafta qoyskan aaladaha ah. Ma ahan in ay ahayd wax lala yaabo, markii la arkay in shan bilood ka hor durba la xaqiijiyay in aysan taleefano ka jiri doonin sanadka 2019 gudaheeda.
Bilo ayaa laga joogaa tan iyo waxaa laga baqay in dhamaadka Xiaomi Mi Max ay run tahay. Maamulaha guud ee shirkada ayaa xaqiijinaya hada. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii shirkaddu ay abuurayso noocyo cusub oo taleefanno ah sannadka 2020 si loogu beddelo noocyadan. Sideed u aragtaa go'aankan shirkadda?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi kama soo saari doonto taleefannada badan Mi Mi range